သာသနာ့အရေခြုံ ဒုစရိုက်သားလူမိုက်များပွါးများလာကြောင်း | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« International Observers Needed In Rakhine State, Burma
“ကျောက်ဖြူ အကြမ်းဖက်မှုကိုလုပ်တာ မြို့ခံ တယောက်ဘဲပါတယ်။ ကျန်တာ အပြင်က ရခိုင်တွေ” (ကမန် တစ်ဦး) »
Tags: History, Rohingya people
This entry was posted on November 3, 2012 at 8:21 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “သာသနာ့အရေခြုံ ဒုစရိုက်သားလူမိုက်များပွါးများလာကြောင်း”
November 3, 2012 at 8:24 am | Reply
Hundrick Kil အဲဒီ တရားခံပြေးတွေဘယ်ရောက်ကြပါသလဲ?
အဲဒီမှာ သင်္ကန်းစည်းလိုက်ပြီး ဘဝပြောင်းလိုက်ပါတယ်
Myo Tint Than ကို Patrick Tan !
အဆောင်မှူးကဦးဆန်းတင့် ( Botany )။
ချင်း၊ရှမ်း၊ မြေပြန့်သား နဲ့ ကျနော်တို့ ဧရာဝတီသားတွေကလူနည်းစု။
ဘယ်လောက်ထိမ်းသိမ်းရခက်တယ်၊ ဆိုတာ ခင်ဗျားလဲကြုံဖူးတာပဲ။
ရေချိုးတဲ့ဂါလန် ၁၅၀၀ ဆန့်အုတ်ကန်ထဲမှာ ညကြီးမိုးချုပ် ကိုယ်လုံးတည်းနဲ့ရေဆင်းကူးတယ်။
အခန်းထဲ အရက်ပုလင်းဝယ်ထဲ့ထားတယ်၊ စုပြီးအရက်သောက်တယ်။ညဖက်အော်ဆဲတယ်။
အပေါ်ထပ်ကနေလှမ်းပြီးသတိပေးတဲ့ အဆောင်မှူးဦးဆန်းတင့်ကို အော်ဆဲပြီးစိန်ခေါ်တယ်။
ဦးဆန်းတင့်ကတော် ( ဆရာမအမည်မေ့သွားပြီဗျာ) ကိုဝန်ကြီးနဲ့
ဝရန်တာမှာ ပက်လက်ကုလားထိုင်ပေါ်အနားယူနေတုန်း ဗျောက်အိုးနဲ့ပြစ်တာ
မြန်မာစာဆရာဦးအောင်ဇော် ( ယခု ဒေါက်တာအောင်ဇော် ) ၁၉၈၄ မှာ
စစ်ကိုင်းဆောင် Hall tutor လုပ်ဖူးသေးတာပဲ၊သူ့မေးရင်အကုန်မှတ်မိမှာပါဗျာ။
Khin Maung ကျွန်တော်လည်းကြုံဖူးတယ်၊ ရမ်းဗြဲတို့မာန်အောင်တို့ဘက်ကနေ ဧရာဝတီတိုင်းဘက်ကို ရခိုင်ရိုးမကိုကျော်ပြီးဝင်လာကြတယ်။ အရင်ရောက်နေတဲ့ အထိုင်ကြနေပြီးသား ရခိုင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာနေကျတယ်။ လူငယ်တွေက ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေပြီး ပန်းတိမ်၊ ဆံပင်ညှပ်၊လက်သမား၊ သင်ယူပြီးအခြေချနေကြတယ်။ အမူ့တွေပါတွေ ဖြစ်ရင်လည်း အနောက်ဖက် (ရခိုင်ဘက်)ကိုပြန်ပြေးသွားကြတာပဲ။ဟိုဘက် (အနောက်ဖက်) မှာအမူ့ဖြစ်ပြီးဝင်လာတဲ့သူတွေလည်း ပြည်မဘက်ဝင်လာရင် လမ်းစပျောက်သွားပုံရတယ်။ အခုသတိထားမိတာ တစ်ခုကတစ်ချို့ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာရခိုင်ဘက် (အနောက်ဖက်)က ကိုယ်တော်တွေ များတယ်ဗျ။
Khin Maung တစ်ချို့ရခိုင်တွေ မွတ်ဆလင်တွေအပေါ်မှာ အမုန်းတရားကြီးတာက ကျွန်တော်တို့လည်းတက္ကသိုလ်မှာကြုံဖူးတယ်။ ကျောက်ပန်းတောင်တို့၊ဘာတို့ဘက်က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ မွတ်ဆလင်မုန်းတီးမူ့အတော်ပြင်းထန်တယ်။တစ်ခါတုန်းက ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ ငြင်းကြခုံကြရင်းနဲ့..ကျောက်ပန်းတောင်သားက မနိုင်တဲ့အခါကြတော့..ဘာပြောသလဲဆိုတော့…မင်းတို့ကုလားတွေ ငါတို့ကျောက်ပန်းတောင်မှာဆို ခေါင်းပြတ်သွားပြီတဲ့။ ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒီကျတော့မှ ကျောက်ပန်းတောင်ဘက်က အခြေအနေကိုသိသွားတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့၁၀နှစ်ကျော်ကကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးပါ။ အခုတော့တစ်နိုင်ငံလုံးများမွတ်ဆလင်မုန်းတီးရေးတရားများပြန့်နှံနေပြီလို့ခံစားရတယ်ဗျာ။